Catalonia Archives - Nchịkwa Mmadụ na Ihe Osise site na pixelHELPER Foundation
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski Ihe na mkpọsa Permalink
Mkpesa ọkụ maka Julian Assange. Worldwide. Now!
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 18. January 2019
Ajula ihe obodo gi nwere ike imere gị, kwuo ihe ị ga - emeli Assange, mgbanwe John F. Kennedy kwuru na akụkọ ihe mere eme na-enwu ọkụ na Ofesi US na Berlin. Ndị America nke na-eme mpụ agha oge niile, site na ndị na-ahụ maka onwe ha na agha Vietnam nke gburu ọtụtụ narị puku ndị o metụtara ndị nta akụkọ gburu na Iraq na agha, ga-ewepụ arịrịọ ha.
Detuo maka ụbọchị ọzọ nke ikpe ahụ; 25.02. bụ ụbọchị ikpe maka ịchụpụ United States.
Ma n'ihi na e zobere eziokwu ahụ ogologo oge ma ọ nweghị gọọmentị na-akwado akụkụ Julian, a ga-enyefe ndị Bekee ahụ n'aka ndị America. Ọ bụ ya mere n'ọnwa a ka anyị ga-eji kpọọ ngagharị mgbasa ozi na ọgba aghara art, ụlọ ọrụ US na mba ofesi, White House na ụlọ US ndị ọzọ dị ná mba ọzọ.
Nye onyinye ugbu a iji kwe omume, ma ọ bụrụ euro 333 ma ọ bụ euro 5, obere ego nyere aka! Mee ihe maka ogo ozi nke echi, nke ị ga-eme mkpebi!
Nwanyị nwanyị kwesiri ịgbaghara Julian Assange
Ọ bụrụ na ọ bụ ntaramahụhụ ịnata & kesaa ozi nzuzo na uru ọha, kedu ihe ọzọ akụkọ mgbasa ozi nwere ike ịkọ? Gọọmentị na-ekpebi ihe nkewa na ihe nzuzo.
Ihe n'ụzọ ike nke USA megide #Assange dị ịtụnanya: Ọ na-arịa ọrịa siri ike na ụlọ mkpọrọ nchekwa kachasị, ọ fọrọ obere ka ọ nwụọ. Onye obula zoputara onye ozo puru izoputa nnwere onwe! Snowden gakwara n'ihu nọdụ na Moscow n'ihi na mba ndị ọdịda anyanwụ niile na-atụ egwu ịbọ ọbọ nke ndị America.
@Wikileaks bụ onye iro nke ochichi US kemgbe afọ 2010. Anyị na-achọ ka ewepụtara anyị ozugbo #JulianAssange site na njide ya na Lọndọn. Nwanyị nwanyị kwesiri ịgbaghara ya ozugbo ma nyekwa onye gbara ọsọ ndụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Ntinye ọkụ na ụlọ ọrụ nnọchite anya United Kingdom
Mgbasa ozi ochie maka ndị mkpọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọzọ
Achọghị njide ejidere ndị mmadụ na-akwado ndị mmegide ndọrọ ndọrọ ọchịchị. German ikpe nwere ezigbo ihe mere na ọ bụghị extradite Carles Puigdemont na Spain. Achọpụtaghachiri iwu omekome dị ka ụzọ nke esemokwu ụlọ na mkpagbu nke ndị mmegide ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ụzọ dị njọ. Ndị ọkàikpe Germany agaghị etinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Spain ma ọ dịghị ihe ọzọ, site na akụkọ ihe mere eme na-egbu mgbu nke mmebi iwu nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị agaghị enwe ike inye aka. Ọ bụrụ na ọ ka kwadoro mmezi ahụ, iwu ahụ na-emeghe ma Catalan nwere ike ịchọrọ n'ụlọikpe Federal Constitutional Court. N'ebe ahụ, a ghaghị ibute ikike nke onye ọ bụla karịa egwuregwu ike na Spain.
→ Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị 10 Catalan nọ n'ụlọ mkpọrọ
1. Jordi Cuixart - ụbọchị 161 n'ụlọ mkpọrọ
2. Jordi Sànchez - ụbọchị 161 n'ụlọ mkpọrọ
3. Oriol Junqueras - ụbọchị 144 n'ụlọ mkpọrọ
4. Joaquim Forn - ụbọchị 144 n'ụlọ mkpọrọ
5. Basis - Ebubo maka oge nke abụọ tupu ụbọchị 3
6. Raül Romeva - eburu n'ụlọ mkpọrọ maka oge nke abụọ tupu ụbọchị 3
7. Jordi Turull - mkporo maka oge nke abụọ tupu ụbọchị 3
8. Josep Rull - tinye ya n'ụlọ mkpọrọ maka oge nke abụọ tupu ụbọchị 3
9. Carme Forcadell - a tụrụ ya mkpọrọ na 3 ụbọchị gara aga
10. Carles Puigdemont - Mkpọrọ n'ihu 3 ụbọchị
→ Ke adianade do, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-esonụ na-eyi egwu na a tụrụ ha mkpọrọ ma na-ebi ugbu a n'agha:
1. Toni Comín
2. Meritxell Serret
3. Meritxell Borràs
4. Clara Ponsati
5. Anna Gabriel
6. Marta Rovira
Jiri nlezianya na-ebipụta & nlebara anya - kwado anyị ugbu a! Dịka onye na-enye onyinye ị na-enye onyinye dị oke ụba maka mkpali nke iwe ọha - maka ụwa ka mma. Buru ugbua ugbu a ma mee ka ihe ojoo ghara idi. Enweghị ebe ị ga-esi nweta nnupụisi na ọgba aghara dị ukwuu maka Euro ọ bụla enyerenụ dị ka ebe a. Biko gaa na ebe nrụọrụ weebụ anyị: PixelHELPER.org/ Nye onyinye ma ọ bụ kwadoro Facebook Fundraiser:
Onye na-ese foto: Dirk-Martin Heimzelmann
Onye na-ese ihe nkiri: Onye òtù PixelHELPER
Nnwere onwe maka #Puigdemont gbara na ụlọ mkpọrọ Stasi na Berlin. Anyị na-eme mkpesa megide ijide ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ndị Catalan na Spen. Anyị na - akpọ ka a tọhapụ ndị mkpọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Spain ozugbo. #PixelHELPER na - agba ndị gọọmenti etiti ume ka ha kwupụta ozugbo na Germany agaghị eme ka ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-agbapụ aka. Nkwado dị otú ahụ nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Spanish maka ịrịọ aka maka iwu chọrọ iwu nke iwu gbasara enyemaka mba ụwa - n'agbanyeghị mkpebi ikpe ụlọikpe. N'iburu na okwu ahụ dị mkpa, onye na-enye ikike bụ Gọọmenti Federal dịka Minista nke Ikpe Ikpe Katarina Barley. Anyị na-agwa gọọmenti etiti gọọmenti iji hụ na a tọhapụrụ Carles Puigdemont na German mkpọrọ!
Jiri nlezianya na-ebipụta & nlebara anya - kwado anyị ugbu a! Dịka onye na-enye onyinye ị na-enye onyinye dị oke ụba maka mkpali nke iwe ọha - maka ụwa ka mma. Buru ugbua ugbu a ma mee ka ihe ojoo ghara idi. Enweghị ebe ị ga-esi nweta nnupụisi na ọgba aghara dị ukwuu maka Euro ọ bụla enyerenụ dị ka ebe a. Biko gaa na ebe nrụọrụ weebụ anyị: PixelHELPER.org/ Nye ma ọ bụ kwadoro Facebook Facebook: https://www.facebook.com/donate/1972507843071293
Mmiri Ara Arab ga-eweta ihe nrite ma malite usoro ọhụụ nke ọchịchị onye kwuo uche ya. Ma ndị nnupụisi ahụ n'oge ahụ bụ ndị mkpọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ugbu a. Ndị mmadụ tinyere ndụ ha n'ihe ize ndụ na mba ndị gbara ọchịchịrị na nnwere onwe nnwere onwe nke Amnesty International dị n'ụlọ mkpọrọ taa ma ụwa echefuola ya. PixelHELPER chọrọ imechi ebe a ma tọhapụ ndị mkpọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Mbụ anyị edinam ga-eme ka 13 ndị na-anọdụ na March 2011 n'ụlọ mkpọrọ azụ n'ime ìhè. The "Bahrain 13" e jidere mgbe riots nke February 2011 na Bahraini isi obodo Manana, ka kwadoro na ebubo nke ọchịchị izu ọjọọ. Ọtụtụ na-ekwu na òtù dị otú ahụ dị ka Amnesty International na Human Rights Watch na-ugboro ugboro na-ezo aka osisi ịta. Ndị mkpọrọ ahụ na-ahụhụ anya.
Nchegbu ahụ anaghị akwụsịkwa maka ezinụlọ. Ndị mkpọrọ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka nọ n'ụlọ mkpọrọ taa, na -eme ahịrịokwu 5 site na mkpụrụokwu ndụ gaa n'ọtụtụ okwu ndụ. Onye ọ bụla nwere ikike ikwupụta echiche ha. Ka anyi ghara ichefu ndi ezi mmadu ndi nyere onwe ha ohere ime ka ndi mmadu nweta ochichi onye kwuo uche na udo.
Mkpesa ọkụ maka Julian Assange. Worldwide. Now! April 21st, 2020Oliver Bienkowski
Kedu ihe na-abaghị uru anyị nwere ike ime n'enweghị onyinye gị ??????????????????? ?????????
nnapu mgwoagha Android App Bahrain 13 Federal Chancellery Federal ọgụgụ isi ọrụ Ọrụ ọgụgụ isi mara mma ohia ọkụ China ego ego Feuer osisi ịta freeRaif nnwere onwe nke echiche hercules enyemaka ndi mmadu mkpọsa mkpọsa Catalonia ụlọ ọgwụ landmines Ịhụnanya amaghi oke Livestream Live iyi Enyemaka enyemaka Livestream Loreley Morocco nke m NSA n'ụlọ Oberwesel ndị mkpọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị Akuku Orlando agha Saudi Arabia igweanu Help spanish mmiri Spirulina Uighurs Uyghur nchekwaba onwe United Stasi nke America upcycling ogwe aka ahia Ee anyị na iṅomi! nlekota oru
Mmetụta / Akara